Maraakiibta shisheeye ee xeebaha Soomaaliya ka xaalufiya kheyraadka oo la shaaciyay – Bandhiga
Home Akhriso: Maraakiibta shisheeye ee xeebaha Soomaaliya ka xaalufiya kheyraadka gaar ahaan Kalluunka?
Maraakiibta shisheeye ee xeebaha Soomaaliya ka xaalufiya kheyraadka oo la shaaciyay
in Akhriso: Maraakiibta shisheeye ee xeebaha Soomaaliya ka xaalufiya kheyraadka gaar ahaan Kalluunka?
Faarax Cawaash Beeldaaje wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka Puntland oo shir saxaafadeed qabtay ayaa shaaciyay shaacisay tirada, magacyada iyo dalalka laga leyahay maraakiibta sharci darada uga kalluumeysta xeebaha dalka.
Beeldaaje ayaa si gaar ah u sheegay in maraakiibta ay dhibaato ku hayaan kheyraadka faraha badan ee xeebaha Puntland, waxaana uu tilmaamay in dabagal lagu hayo si sharciga loola tiigsado.
Wasaaradda kalluumaysiga ee xukuumadda federaalka ayuu sheegay in ay dacwado ka dhigeen dekedaha wadamada ay u iib geeyaan maraakiibtaas kalluunka ay ka xadaan xeebaha Puntland.
Magacyada Maraakiibta lagu eedeynayo in kalluumaysi sharci daro ah ay ka wadaan xeebaha dalka ayuu soo bandhigay wasiirka , gaar ahaan xeebaha gobolka Bari iyo dalalka laga kala leeyahay.